Jowhar (, , , waxaa loo aqoon jiray Villaggio Duca degli Abruzzi) waa xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ee Gobolada Soomaaliya. Waa magaalo ay gacano badan iskaga dambeeyeen burburkii kadib hadda waxaa gacanta ku haya maamulka Dawladda federaalka Soomaaliya, taasoo kala wareegtay Al-Shabaab.
Waxay 90 km (50 mi) magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Sidoo kale waxay leedahay garoon diyaaradeed woqooyiga magaalada.
Jowhar waxaa aas aasay beeraaleey ka socotay boqortooyadii Saafooy, beeraaleeydaas waxaa ugu caansanaa Luigi Amedeo, Duke of the Abruzzi, kaasoo yimid Soomaaliya 1873 wuuna ka helay deegaan ahaan. Duke wuxuu guda galay dhismaha, jidad, iyo dhabba tariin, iskoollo, isbitaallo, iyo dhismo masaajid ay dadka deegaanka ka codsadeen. Wuxuuna guursaday haweeneey soomaaliyeed kadibna halkaas ayuu ku geeriyooday.
1920kii Villaggio Duca degli Abruzzi u aheed deegaan dhul beereed ah, 1926dii waxa ay magaalada ahayd 16 xaafadood oo ay daganyihiin 3000 Soomaali 200 talyaani. waxaa bartamaha magaalada jowhar mara webiga shabelle oo kala qeybiya 4afarta xaafadood ee jowhar uu ka kooban yahay kuwaasi oo kala ah horseed iyo buulasheikh oo dhanka bari ee magaalada jowhar xiga iyo kulmis iyo hantiwadaag oo iyana ah xaafadaha galbeed uga beegan magaalada jowha. dadka asaliga ah ama sida saxda ah loogu yaqaan jowhar waa qabaailaadka kala ah waaqbiyo iyo walamooy oo ka wada tirsan beelaha shiidlo ee dega deegaanada gobolka shabellaha dhexe gaar ahaan hareeraha webiga shabelle ee gobolka shabellaha dhexe.
jowharna waxaa leh dagana bessha shiidle 89% inta kalana waa isudardar gaaljecel makane iyo abgaal
Magaalada waxay soo noqatay xaruta Dawladda kumeelgaarka ah ee soomaaliya xiligii xukuumadii cali maxamed geedi iyo madaxweynihii cabdullaahi yuusuf, waxaana ka talinayay xiligaa hogaamiyihii koofurta maxamed dheere oo kusoo dhaweeyay dowladii habawga aheed ee kiinya lagusoo dhisay. waxaana magaalada ka qabsaday midoowgi Midowga Maxkamadaha Islaamiga 2006dii bishii diseember.Magaalada Jowhar waxay u jirtaa caasimada muqdisho 90KM. waxaana magaalada dhex mara wadada weyn ee kasoo baxda magaala muqdisho ee isku xitra gobolada dhexe ee wadanka.Waxaa ay leedahay garoon diyaaradeed oo caalami ah, waxaana markeeda hore isticmaali jiray dowladihii dhexe ee siyaad bare, waxey garoonkaas ku taalaa woqooyiga magaalada jowhar.Waxaa kale oo magaalada ku taalo warshaddii weyneed oo soo saari jirtay sonkorta iyo warshaddii barafuunka iyo warshaddii suufka sameynjirtay.Jowhar waxee ku taalaa dhul beereed aad u baaxad weyn.Magaalada waxay caan ku tahay beeraha iyo xoolaha.
Warshada Sonkorta ee Jowhar waa warshad oo soo saarto sonkor waxeena ku taalaa magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Warshadaan waxaa la sameeyay 1926kii. Waxa ay ahayd warshadda ugu wayn bariga afrika, awood waxay ulahayd inay sameeyso 3,000 Kiintaal oo qasabka sokorta laga sameeyo, waxa kaloo ay samayn jirtay sifaynta sokorta, waxay lahayd Rug shaybaar Kiimikada ah oo lagu baari jiray qasabka inta ay hawsha waddo, waxa ayna ku shaqayn jirtay Gaas-Dabiici oo laga soo saari jiray haraaga walxaha qasabka iyo miraha.
Magaalada waaxaa ka howlgala shirkado isgaarsiin oo ah shirkadaha ka howlgala dhamaan Soomaaliya sida Hormuud, Nationalink, Orbit, Somafone, iyo telecom somalia.
'Internetka ama shabakadaha midoobay'
Magalada Jowhar waxey leedahay website ugu caansan Soomaaliya lana yiraahdo www.jowhar.com. Dhinacyada is gaarsiinta waa arin ku soo korodhay sanadkii 2002-05 20 xilli ay reer jowhar badan dibadaha qabteen loona bahdaay barkulaan.
waxaana website ka www.Jowhar.com asasaay wiil reer jowhar ah laguna magacaabo Saalax yuusuf Macalin kuna dhashay magaalda jowhar kuna soo barbaraay kuna noola ilaa sanadkii 1986.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jowhar&oldid=180035"
Last edited on 8 Sebteembar 2018, at 23:57
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 Sebteembar 2018, marka ee eheed 23:57.